NextMapping | Koorso 1: Qof walba waa hoggaamiye
Koorso 1: Qof walba waa hoggaamiye
Mustaqbalka Aasaasiga ah ee Barnaamijka Tababbarka Hogaaminta Shaqada
Tani waa halka ugu horeysa ee loogu talagalay barnaamijyada aan caadiga ahayn ee safarka Tababarka Hoggaanka Sare ee Horukaca. Haddii aad tahay hoggaamiye soo if-baxay ama aad leedahay waayo-aragnimo sannado ah, safarku wuxuu ku bilaabmayaa 'Qof walba waa Hoggaamiye.'
Hoggaamintu waa safar, maahan safar. Safarku wuxuu ubaahanyahay si joogta ah dhisida iyo dib u soo nooleynta xirfado badan oo kaa badan inaad tusto sida loo hago, dhiirigelin iyo ula shaqeynta kuwa kale. Barnaamijkan, kaas oo ah bilowga safarka, fikradaha 'Qof walbaa waa Hogaamiye' waxaa loo sharxay oo si qoto dheer looga wada hadlay, oo ay kujiraan waqtiga maskaxdu ubaahantahay inuu ka hogaamiyo jagadan.
Daraasad caalami ah ayaa lagu bixiyaa barnaamijkan oo dhan oo lagu xaqiijinayo:
Ururada guuleysta waa iney lahaadaan dhaqan ay runtii lagu dhihi karo 'Qof walbaa waa Hogaamiye' - shaqaaluhu wey kusii socdaan iyaga oo aan la weydiin
Waxaa jiri doona diirad saarid yar 'cinwaanka' iyo inbadan oo ahmiyada la saarayo isla xisaabtanka guud iyo qaadashada lahaanshaha iyo masuuliyada goobta shaqada.
'Mustaqbalka Shaqada ayaa Hada ah' maahan fikrad, waa dhab waana waqtigii la is diyaarin lahaa!
Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay Cutubyo 11 ah oo midkasta daboolaya xaqiiqada cusub ee hogaaminta iyo sida loogu dhaqmo dhaqso leh.
Qiimayn iskiis ah oo lagu go'aaminayo halka aad imika ku saabsan tahay xirfadaha hogaaminta aasaasiga ah. Qiimeyntan shaqsiyeed waa qeyb muhiim ah waxaana loo istcimaalay sidii loox furista dhameystirka koorsada.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee hoggaanka ayaa looga wada hadlayaa iyada oo loo eegayo 'mustaqbalka' mustaqbalka shaqooyinka wax lagu baro wax ku-oolka ah ee mawduucyada ay ka mid yihiin; xirfadaha go'aan qaadashada muhiimka ah, xallinta dhibaatada hal abuurka, saameyn ku yeelashada dadka kale, xirfadaha mashruuca iyo waxbadan, aad u badan.
Koorsadani waxay sidoo kale bixisaa tabta ugu ugu casrisan ee maaraynta khilaafaadka, iskaashiga iyo xirfadaha tababbarka shaqsi weyn, koox iyo waxqabadka hay'ad.
'Qof walbaa waa Hogaamiye' waxaa ku jira taatikada la xaqiijiyay ee qorshaynta istiraatiijiyadeed.
Waxyaabaha ficilku waa in la dhammaystiro oo waxa jira tiro-koobyo dhammaadka Qayb kasta oo koorsada ah si loo hubiyo fahamka iyo loo wanaajiyo 'dheelitirka'.
Iyada oo ah ikhtiyaarka tababbarka shaqsiyeed waxaa jira shirar madhan oo loo maro Skype ama wax la mid ah halkaasoo uu tababaruhu ku hubin doono fahamka kaqeybgalaha, kaalmaynta hagida nolosha dhabta ah ee xaaladaha shaqada iwm.
Barnaamijku wuxuu ku soo gabagabeynayaa kaqeybgalayaasha dhammeystiraya Qorshe-hawleedkooda '90-Day' ee loogu talagalay ku biirista waxbarashada kaalintooda jira.
Mustaqbalka Shaqada ayaa ah Hadda, iyo in ururada ay ku koraan oo ay ku guuleystaan ​​fikradda ah '' Qof walbaa Waa Hogaamiye '' waa in lagu dhexjiro dhaqanka.
Waxaan kugu socodsiin doonnaa tillaabooyinka sida taa looga dhigo!